Friday September, 24 2021 - 11:25:16
Saturday July 17, 2021 - 13:20:04 in by salman abdi
Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka hadashay iney ciidamo u dirayaan dagaalka Tigreega Maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in suuragal tahay iney ciidamo u diraan dowladda dhexe ee dalka si ay uga qeyb qaataan dagaalka u dhaxeeya dowladda iyo Falaagada TPLF.
Wasiirka Warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Cali Badal Muxumed oo la hadlayay Idaacada VOA-da ayaa sheegay in maamulka dowlad deegaanka uu qeyb ka yahay dowladda Fedaraalka dalka Itoobiya, islamarkaana ay taageero u fidinayaan dagaalka ay dowladda dhexe kula jirto Jabhada TPLF.
"Dowladda dhexe ee dalka hadii ay taageero inooga baahato wan garab istaageyna waana suurtagal inaan ciidamo u dirno, balse horay uma jirin wax ciidan ah oo aan u dirnay ka qeybqaadashada dagaalka dowladda iyo TPLF" ayuu yiri Wasiir Cali Badal.
Wasiirka Warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sidoo kale sheegay iney ka go'an tahay maamulka deegaanka ka qeyb qaadashada sugida amniga deegaanada kale ee dalka Itoobiya, islamarmaana aysan ogolaan doonin in qalqal la galiyo amaanka deegaankan iyo dalkaba.
Hadalkan kasoo yeeray maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa inaanaya, iyadoo dowladda dhexe ee dalka Itoobiya ay dagaal aanan wali dhamaan muddo 8 bilood ah kula jirta Jabahada TPLF oo ka dagaalanta gobolka Waqooyi ee Tigreeyga.
Daawo: Diyaaradda Air Arabia Oo ka Soo Degtay madaarka Hargeisa, Iyo Xukuumada oo ka hadashay Xannibaadi laga qaaday
19/09/2021 - 23:43:49
Daawo:Wafigii dawlad deegaanka ka socday ee ka soo qayb galay aaska suldaan cumar Oo qado sharaf logu sameyey Hargeysa
16/09/2021 - 22:37:55
Daawo: Maayar mooge Oo Ka Hadlay Qorshayaasha U Yaala Iyo Misaaniyada Dowlada Hoose
09/09/2021 - 23:35:33
BERBERA-Dawlada Hoose ee Degmada Berbera oo Ka Hadashay Heshis Hore u Dhexmaray Shirkadaha Basaska Rakaabka
04/09/2021 - 23:19:56
Daawo:Xildhibaanada Golaha Wakiilada Somaliland ayaa Dood Adag ka Yeeshay Xeerka Shaqaalaha Dowlada
04/09/2021 - 23:00:52
Daawo: Weftigii Culimada Soomaalida Ugu Caansan Iyo Soo Dhaweyntii Borama
28/08/2021 - 18:05:35
Daawo: Wasaarada arrimaha Gudaha JSL oo tabobar u qabatay G/deegaanka ee degmooyinka Boorama Iyo Saylac
24/08/2021 - 21:09:41
Daawo Somaliland oo Diyaarineysa Xeerka Anshaha Shaqaalaha Dowlada
24/08/2021 - 20:55:53
Daawo:Madaxweynaha Turkiga, Ayaa ballanqaaday inuu gacan ka geysanayo dhexdhexaadinta dagaalka itobiya
20/08/2021 - 14:46:38